Adin’i Syria, Mety ho Ananana Lahatahiry Betsaka Indrindra Hatramin’izay—Nefa Kely ny Fantatsika Momba Azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2017 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, bahasa Indonesia, Ελληνικά, عربي, Italiano, Español, Shqip, Português, Български, English
Sarintany Liveuamap ao Aleppo, Syria mamariparitra ireo tranga voamarina tamin'ny 7 Desambra 2016, rehefa teo am-pianjerana i Aleppo. Ny Liveuamap dia “sehatra fampitam-baovao iray tarihin'ny lahatahiry misokatra” izay mitsongo dia ireo zava-nitranga tamin'ny fifanandrinana voafaritry ny fotoana, ny toerana ary ny karazany. http://syria.liveuamap.com/en/time/07.12.2016
Arahinay ny siokan'i Bana Alabed, fito taona sy ny reniny; ireo hafatra farany nataon'ireo mpikatroka sy mpiady miandry fotoana hitolo-batana na ho faty; ary mitady izay hanamarinana mety ho fisiana fanafihana ara-tshimika na tantara mifandrirotra ahenoana fandarohana baomba ireo hopitaly. Ary mandritra izany fotoana izany, mitolona izahay hahatakatra raha mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika izao tontolo izao izany vaovao izany, na manakorontana azy.
Ny ady an-trano syriana no mety nahazoana lahatahiry betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny ady. Sary, lahatsary, blaogy, sioka ary raki-peo an-tapitrisany no niforona hiresaka momba ny ady, ny fiainana izay mitohy ao Syria na dia eo aza ny ady, ary ny krizin'ny fialokalofana mifandraika amin'izany. Vokatry ny kolontsaina ara-pampitam-baovao ifarimbonana miroborobo eo amintsika, vokatry ny fifanosonana antontakevitra nomerika sy ny fieritreretana izay tandra vadin-koditra amin'ny fiainana maoderina amin'ny ankapobeny ireo fampitam-baovao — natsangan'ny mpampita vaovao, olom-pirenena, mpikatroka, mpitolona ary lasibatra — ireo.
Talohan'ny ady i Syria natanjaka ny teknôlôjiam-pifandraisana tao aminy, nahitana tambajotram-pampitam-baovao ho an'ny daholobe, fahitalavitra avy amin'ny zanabolana, lahatahirin'aterineto sy finday. Ny fahazoana miditra amin'ireo teknôlôjia ireo no nahafahan'ny Syriana nifampiresaka sy nifandray tamin'izao tontolo izao. Mbola misy hatramin'izao ny sisa tavela amin'ireo tambajotra ireo ahafahan'ny olona ao anaty ady mizara vaovao. Na dia teo aza ny ady (na vokatry ny ady angamba), dia ny tambajotram-pampitam-baovaon'olontsotra syriana, izay nitombo ny fahalalàna sy ny talenta, no fantsona lehibe tamin'ny fandraketan'antonta-kevitra momba ny ady.
Saingy ny fahazoa-miditra amin'ny tahirim-baovao an-tserasera goavana momba ny ady dia tsy miantoka fa mirindra na miseho araka izay andrasantsika amin'ny tati-baovaon'ny ady izy ireny. Satria tsy mitatitra tsy misy fitongilanana amin'ny zava-misy araka ny fitrangany tsotra fotsiny ny vaovao ao anaty fifanandrinana maoderina. Ao anatin'ny fifanandrinana hitandroana ny fomba fijery ny ady sy ny mpiady ao aminy ihany koa ny vaovao. Io avy eo no manefy ny hevitra amin'izay mitandro ny marina sy [manaja ny] maoraly, amin'izay mendrika hotohanana ara-politika na ara-pitaovana, ary iza no ho lasibatry ny fanafihana.
Singa ara-tetikady iankinanan'ny aindehibe ao amin'ity ady ity ny vaovao sy ny fikirakirana azy, ary lasa fitaovam-piadiana ny fifehezana ny vaovao. Tany ampiandohan'ity tolona ity ny Tafika Eletrônika Syriana, vondron-kery iray manohana ny fitondran'i Assad, nanao lasibatra ireo mpikatroka tamin'ny fanafihana “distributed denial-of-service” (DDoS), fisovohana ary rindran-tsompatra. Mandritra izany fotoana izany, samy mamely ny mpampita vaovao noho ny asany na ny fitondran'i Assad na ny ISIS.
Miezaka manova ny fizotran'ny ady amin'ny alalan'ny fampiasana herisetra maharikoriko izao ohatra ny ISIS, indrindra amin'ny fandraketana ho tahiry ny fanapahan-doha mikendry manokana ireo Tandrefana mpanolo-baovao sy ny fanapariahana azy amin'ny alalan'ny fantsom-baovao maro.
Tsy mitrangattranga fotsiny amin'izao ny zavon'ady; mandray anjara amin'izy io ao anaty tetikady ny mpiady, mikendry ny hahavalalanina sy hanasaritaka ny mpifanandrina aminy.
Manoloana ny herin'ny fandisoam-baovao, dia fanamby goavana ny mitady sy manangana fitantarana mitombina momba ny ady. Mahafantatra isika ankehitriny ny fitsipika fototra sy ny teknika amin'ny fandrafetana, fandaharam-pahamehana ary ny fanamarinana ireo vaovao mivoaka avy ao Syria. Afaka manavaka [manondro] ny zavamisy isika ary manangana porofo amin'ny alalan'ny famakafakana nisiam-pitandremana, sy tamin'ny alalan'ny teknikam-pandinihan'ny fampitam-baovao tahaka ny fitadiavana sary mivadika ankavanana miankavia, fikarohana ny toerana nandraketana ny lahatahiry. Afa-manangana sy mitazona fifandraisana anjakan'ny fifampitokisana eo amin'ny namana, mpiara-miasa ary loharanom-baovao eo akaikin'ny vava ady isika.
Afa-mahafantatra zavatra betsaka momba ity ady ity isika, saingy tsy ho ampy mihitsy hanovana ny fandehan-draharaha ny fahalalàna fotsiny ny zavamisy. Tsy voatery hisy fiantraikany amin'ny ho fizotran'ny raharaha ny manaporofo fisian-trangan-javatra. Izay no singa voalohany ahatakarana ny fahefana, sy ny fetrany.
Ny Public Radio International mpiara-miasa amin'ny Global Voices no namoaka voalohany ity tantara ity.